Xiisad u dhaxeysa maamulada Puntland iyo Somaliland oo ka taagan deegaano ka tirsan… – Hagaag.com
Xiisad u dhaxeysa maamulada Puntland iyo Somaliland oo ka taagan deegaano ka tirsan…
Posted on 13 Maarso 2019 by Admin in National // 0 Comments
Xiisad u dhaxeysa maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa ka taagan deegaano katirsan gobolka Sanaag, waxaana labada maamul halkaasi geeyeen ciidamo badan oo laga cabsi qabo in ay isku dhacaan.
Maamulka Somaliland ayaa ciidamo badan oo Milatari ah soo galiyay deegaano katirsan gobolka Sanaag oo Puntland hoostaga, waxa ayna ciidamada durba la wareegeen deegaano ay kamid tahay Yubbe oo Puntland maamuleysay.
Ciidamo badan oo katirsan maamulka Puntland ayaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay iyana gaareen deegaano katirsan gobolka Sanaag gaar ahaan meelo aan ka fogeyn halka ay yimaadeen Ciidamada Somaliland.
Madaxtooyada maamulka Puntland qoraal shalay laga soo saaray ayaa lagu sheegay in uu ka dhamaaday dulqaadka ayna iska difaacayaan daandaansiga iyo weerarka uga imaanaya maamulka Somaliland.
Shacabka ku dhaqan deegaanada ay xiisadu ka jirto ayaa waxaa lasoo darsay cabsi xoogan, waxa ayan shacabku ka cabsi qabaan in ciidamada labada maamul ay korkooda ku dagaalalamaan.
Somaliland iyo Puntland ayaa marar badan waxaa dhax maray dagaalo xoogan oo salka ku hayay gacan ku heynta deegaano iyo degmooyin labada maamul isku heestaan, waxaana dagaaladii ugu dambeeyay ka dhaceen aaga Tukaraq ee gobolka Sool.